Qorshaha Wadada Channel Istanbul ee Lagu dhawaaqay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulQorshaha Wadada Istanbul ee Qorshaha Wadaagga ayaa la go'aamiyey
30 / 05 / 2014 34 Istanbul, GUUD, Headline, TURKEY
Qorshaha Wadada Kanal ee Istanbul wuxuu noqday mid cad: Wadada Kanal Istanbul, oo loo yaqaan mashruuca waalan ee Istanbul, ayaa noqotay mid cad. Ra'iisul wasaaraha Tayyip Erdogan ayaa horay u shaaciyey doorashadii 2009 ee mashruuca diiqadda ah ee Istanbul, marinka waddanka Istanbul iyo degsiimooyinka cusub ee lagu samaynayo waddada iyo kaydka dhulka. Hore Silivri, Ortakoy, Inceegiz, Gökçeli, Çanakça, Dağyenice ayaa loo aqoonsaday gobolka Karardaoy, Evcik Dam oo ku xiran Badarka Badda sababtoo ah dhulka intiisa badan ee lagu kala qaado qaybta.
BARNAAMIJKA MASHRUUCA UGU DAMBEYSA
Kanaalka wuxuu ku jiri doonaa line-yada Smallçekmece-Başakşehir-Arnavutköy. Khariidadda degaannada cusub ee 30 waxaa lagu daabacay Xafiiska Rasmiga ee Abriil iyada oo cinwaankiisu yahay khariidadda Mashruuca Sideedka Istanbul ee Mashruuca. Iyada oo qorshaha cusub, Goobta Badbaadadu waxay ku biireysaa Karaburun. Daraasaddan gudaheeda, daraasado waxaa lagu bilaabay iyada oo ku saleysan khariidado loo diray degmadda Arnavutkoy. Kanal Istanbul waxaa lagu aasaasay meel 6 kun 865, oo ah 68 million 865 kun mitir murabac. 1 million 120 kun dadka 280 ee degaanka ayaa loo xisaabiyey inay ku noolaadaan. 40 waxay ku kici doontaa kumanaan kun oo doolar, mashruucuna wuxuu shaqaaleyn doonaa kumanaan qof.
Faahfaahinta Kanal Istanbul, oo ah magaalad cusub oo la abuuri doono garoonka diyaaradaha, waa sida soo socota:
MAXAA LAGA QAADO: Sababta ugu muhiimsan ee loo dooranayo wadadan mashruucan waa in 80 boqolkiiba dhulalka ku yaala xudduudda kalluunka ay tahay dhul dadweyne mana jirto dhul kayn ah. Sidaa darteed, kharashka mashruuca, gaar ahaan la wareegidda, ayaa hoos u dhigi doona. Inta badan kaydka kaydka iyo goobaha ganacsiga ee gobolka iyo gobollada kale waa 3. Garoonka diyaaradaha waxaa lagu hirgelin doonaa qaab-dhismeed-dhis ah.
2 MAGAALADA CUSUB: Goobta Xasilloon ee 44 X waxaa lagu dhisi doonaa 442 kun 1 oo dhul ah oo laga bilaabo Kucuklimmece iyo iyada oo loo marayo Başakşehir. Magaaladda labaad waxaa lagu dhisi doonaa wareegga 280 kun wareegyada 29 ee Arnavutköy. Bilawga daraasaddan sahaminta, goobaha degaanka iyo ganacsiga kaliya 68 million 865 ayaa lagu dhisi doonaa kun mitir oo laba jibbaaran.
RISK DEGMADA LAGU HELAYO: Meelaha kaydka la aasaasay waxaa loo wareejin doonaa degmooyinka leh halis dhulgariirka. Gobolka Zeytinburnu, Bakirköy, Kucukmurkiye, Bagcılar, Esenler, Gungören, Gaasiyommanpaşa ayaa weli ah magaalooyinka dib u soo kabashada, magaalooyinka cusub waxaa laga dhisi doonaa Arnavutköy iyo Kemerburgaz.
410 DADKA DADKA KA HOR: Shaqaalaynta 410 kun shaqooyin ayaa lagu abuuri doonaa magaalada cusub. 100 kun oo ku yaala garoonka diyaaradaha iyo tiknoolajiyada casriga ah; 50 kun oo jaamacad, caafimaadka, tiknoolajiyadda sare; 10 kun oo waaxyaha maamulka; 100 kun oo maaliyadeed iyo adeegyo; 50 kun ee dalxiiska iyo 100 kun ee aagagga guud, oo ay ku jiraan wadarta 410 kun qof ayaa loo shaqaaleyn doonaa.
GÖL CANLANACAK: Channel Istanbul, Küçükçekmece - Başakşehir - Arnavutköy ayaa isku xiraya badda badda iyo Marmara. Lake Kucukcekmkmece ayaa noolaan doonta marka mashruucu noqdo mid aan la aqbali karin.
MAS'UULIYADDA DHALINYARADA: Sazydere Dam ayaa naafan doonta mashruuca. Mashruuca Melen Stream ayaa diiradda saari doona si loo xalliyo dhibaatada biyaha ee Istanbul. Sidaas darteed, abaarta suurtagalka ah ee ka jirta magaalada Istanbul ayaa laga hortagi doonaa.
SOOMAALIYA SOOMAALIDA SOOMAALIYA
Ra'iisul Wasaaraha Tayyip Erdogan ayaa aasaasi doona aasaaska June 3. Marka laga soo tago mashruuca madaarka, tallaabo cusub ayaa laga qaaday gobolka Arnavutköy, halkaas oo inta badan ee Canal Istanbul ka gudbi doonto. Maalintii hore, wareegto loo soo saaray Agaasimaha Kaydinta Dhulka ee Arnavutkoy ee gobolka oo la xidhiidha iibinta dhulka beeraha ayaa la joojiyay. Dadka magaalooyinka ah iyo kuwa maalgashaduba waxay awood u yeelan doonaan inay iibsadaan oo iibiyaan hal dhul oo dhul ah si looga hortago shakiga dhulka iyo kontoroolka dhulka beeraha. In ka badan hal shaashad ayaa la qaboojiyey ilaa mashruuca lagu dhawaaqay.
SADDEXAAD WAXAA LAGU QAADO
Mitirka 25 iyo mitirka mitirka 150 Meelaha ugu muhiimsan ee istaraatiijiyada iyo istaafinta ee Istanbul, oo u dhexeeya Gobalka Kucukmimmece iyo Degmada Sazlıdere Barakakakir Degmada Altıntepe, Guvercintepe iyo Sahintepe. Saddexda xaafadood, kuwaas oo dhammaantood aan la aqoonsan oo aan la calaamadin, waxay noqon doonaan dhinaca hore ee kanaalka. Sicirrada horey u soo baxeen, laba jibbaar. Kororka qiimaha dhulka ayaa wax yar ka joojiyay cabbirka wasaaradda ee 'Reserve Area'. Dhulku wuxuu ku jiri doonaa Aagga Kaydka oo leh qiimaha hantida loo qoondeeyay in la go'aamiyo.
100 SHIRKADDA HORUMARKA HORUMARKA
Foomka Biyaha Adduunka ee sannadkii hore, saynisyahannadu waxay yiraahdeen, kor u sii daa biyaha dusha sare ee ku xiran tuubooyinka iyo kanalka. Digniinta waa in la siiyaa dhulka dhulka "Channel Istanbul wuxuu ahaa mid wax ku ool ah. ISSI iyo DSİ iyo degmooyinka ayaa qorshayaasha sanadlaha ah ee 50-100 u diri doonaan Wasaaradda Deegaanka iyo Qorsheynta Magaalada Isbuuca soo socda ee ku saabsan xarumaha isgaadhsiinta, tunnelada, ururinta qashin-qubka, dhirta daaweynta iyo mashaariicda kaabayaasha ee xagal-wareega kanaalka. 3. Canal Istanbul, oo ka sii gudbi doonta garoonkeeda, waxay sidoo kale gacan ka gaysan doontaa gobolka marka la eego dalxiiska.
Wasiirka qorsheynta Binali Yıldırım ayaa ku dhawaaqay
TCDD Bozkurt - Mashruuca Khadka Tareenka ee Dinar Taariikhda hindisada ee howlaha dayactirka wadooyinka…
Dadka 41 ayaa ku dhintay shilka tareenka ee Pamukov mar kale la arki doono
Khadka taraamka cusub ee Eskisehir wuxuu bilaabmayaa imtixaan